Echiche na ozugbo mgbe-sales ọrụ na-enye nkwado na nkwa gị uru.
◇ Send na technicians na-ebu echichi na debugging ngwá maka ndị mba ọzọ na ndị ọrụ kwụọ ha ụgwọ. Mba ma ọ bụ mpaghara na-ejighị n'aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ọnọdụ nọ n'oké oge agha na-agunyeghi na anyị plan. .
◇ Zụlite ndị ọrụ iwu na ngwá na-eduzi ha n'ihi na mma mmepụta.
◇ Kọwaa eme mmezi nke ngwá ọma na wepu nkịtị mmejọ.
◇ Anyị na-ahụ maka niile Ndozi na kpatara anyị quality nsogbu n'ime otu afọ akwụkwọ ikike. Foreign ngwa na-adịkarị naputa site DHL na orde inye ọrụ maka mba ọzọ ahịa ozugbo.
◇ The mba ọzọ ahịa ndị nwere ajụjụ ọ bụla na mgbe-sales ọrụ nwere ike na-eziga email ka anyị ẹkedọhọde igbe akwụkwọ ozi. Anyị ga-aza ajụjụ gị 12 awa na idozi dị iche iche na nsogbu n'ihi na ndị ahịa na oge.
◇ N'ihi na ụfọdụ ógbè onye visa na-esi ike inweta, ahịa nwere ike na-ezigakwa ha technicians na anyị ụlọ ọrụ na-enweta free nduzi na ọzụzụ.
◇ Nabata aro mma tinye n'ihu site ahịa na ezi ụzọ. Dị na mgbanwe nke ahịa, enye ngwaahịa na ọrụ izute ọrụ 'mkpa na ike ụkpụrụ maka ha.
◇ The ahịa onye ngwaahịa nwere passsed ya akwụkwọ ikike ụbọchị na-isiokwu na-enwe anyị mgbe-sales ọrụ n'ihi na ndụ.
Ọ bụrụ na ị nwee Iwu
Biko kpọtụrụ anyị na oge
Mgbe-sales ọrụ hotline: + 86-595-22356770 ma ọ bụ mgbe-sales ọrụ E-mail maka mba ọzọ ahịa: aftersales@qunfeng.com ma ọ bụ aftersale01@qunfeng.com
Anyị ga-eme mgbalị nile iji dozie nsogbu gị. Ịga nke ọma gị ga tinye ọhụrụ otuto anyị!
Daalụ maka gị ji ezi obi na-emekọ ihe ọnụ!